Dzivisa Kubatwa Kubatwa nemaAgency | Martech Zone
Dzivisa Kubatwa Kubatwa neAgency
Chishanu, February 5, 2016 Chishanu, February 5, 2016 Douglas Karr
Kuva neyangu agency kwave kuvhura maziso kuti bhizinesi rinoitwa sei ... uye hazvina kunaka. Ini handidi kuti posvo iyi ive inomiririra bashing post sezvo ini ndinonzwira tsitsi nevazhinji vamiririri uye nesarudzo dzakaomarara dzavanofanira kuita. Pandakatanga ini, ndaive nepfungwa yekuti ini ndaisada kuve kuti agency - imwe yemasangano ayo aishereketa uye kudzima vatengi, aisundidzira kuvasimudzira mazuva ese, kubiridzira nekuchinjisa, kana kubhadharisa yakawanda pane inochengeta pavanopwanya.
Isu takave nechibvumirano chakasununguka chakagonesa vatengi kuenda kana vaida, asi zvakatidzosera patiri zvakare - kakawanda. Panzvimbo pekuti irishandiswe senge kunze apo zvinhu zvainge zvisiri kushanda, isu takave nevatengi vanoverengeka kusaina pasi peyedu flat rate system, kusundira zvine hukasha kuti tiwane rimwe basa rakawanda rakaitwa kupfuura ratakapikira, tobva tarega kunzvenga kuribhadhara pasi pemugwagwa. Izvo zvinotitorera isu nguva yakawanda nemari.
Izvo zvakati, isu tichiri kuvenga kuwana maemail seizvi:
Izvi zvinokonzeresa matambudziko maviri akakura. Kutanga, mutengi iko zvino abva pamari uye anoenderana nesangano ravakashandisa bhajeti yavo. Chechipiri, mutengi iye zvino atsamwiswa nesangano, uye mikana yezvinhu zvekutendeuka haina kunaka. Izvi zvinoreva kuti vangangoda kufamba voenda pamusoro. Maitiro anodhura avanogona kunge vasingakwanise kuwana.
Zvichienderana nechibvumirano neanoshanda, iyo agency inogona zvakare kunge iri kurudyi. Zvichida iyo agency inoisa toni yekuedza muhupo hwewebhu uye vari kushanda pachibvumirano apo mutengi arikubhadhara pane chikamu chehurongwa. Iyo saiti inogona kutora chinguva kuti inyore zvakanaka (kunyangwe ini ndiri kushamisika SEO mubatsiri anotora pane anokwikwidza vatengi). Inogona kunge isiri mamiriro ekutapwa zvachose.
Kana iwe uchifunga kuti iyo agency iri kukanganisa chero zvodii, ungangoda kutarisa zvibvumirano zvako. Semuenzaniso, kana tikaburitsa mifananidzo kune iyo agency, isu tinenge tichingozotora vhidhiyo yekubuditsa. Mazhinji ma agency haape zvakasvibirira Mushure meMafaira mafaira kunze kwekunge chiri chikamu chechibvumirano. Kana iwe uchida kutora yekugadzirisa kune iyo animation, iwe uchafanirwa kuenda kuti udzokere kusosi sosi uye uwane imwe kondirakiti panzvimbo.
Maitiro Ekudzivirira Evhizheni Yekutapa Mamiriro
Mukushambadzira kwedhijitari, tinokurudzira kuti iwe ugare uchipinda muhukama nesangano rako uchiziva zvinotevera:
Domain Name - ndiani ane zita rezita? Iwe unogona kushamisika kuti mangani mamiririri anonyoresa zita rezita remutengi, wobva wachengeta. Isu tinogara tichiita vatengi vedu kunyoresa uye kuve yavo domeini.
nemitambo - kana iwe ukacheka zvisungo nesangano rako, unofanirwa here kuendesa yako saiti kune mumwe muenzi kana iwe unogona kugara navo? Isu tinowanzo tengera kuitirwa vatengi vedu, asi zvinogara zviri muzita ravo saka kana vakatisiya, vanogona kungobvisa kuwana kwedu.
Raw Assets - dhizaini mafaira senge Photoshop, Illustrator, After Effects, Kodhi uye nezvimwe zviwanikwa zvinoshandiswa kugadzira zvimwe zvinobuditswa nenhau zvinowanzova zvechisimba kunze kwekunge maitaurirana neimwe nzira. Kana isu tavandudza infographics, semuenzaniso, isu tinodzosera iyo Illustrator mafaera kuti vatengi vedu vagone kuzvidzorera zvakare uye kuwedzera kukosha kwayo. Iwe unogona kushamisika kuti vangani vasingadaro, zvakadaro.
Tenga maringe neRisi
Izvo zvese zvinouya pasi pekuti urikutenga uye uine kodzero kune zvese zvinoitwa nesangano rako, kana kana vakachengeta dzimwe dzekodzero dzebasa ravari kuita. Isu nguva dzose kujekesa izvi nevatengi vedu. Isu takagadzira mhinduro dzinoverengeka nevatengi kwataichengeta mitengo yakaderera nekutaurirana chibvumirano kwataive tiine pfuma. Izvi zvinoreva kuti tinogona kuzvishandisa zvakare kune vamwe vatengi kana tichida. Muenzaniso ndeye chitoro nzvimbo chikuva takavaka makore apfuura tichishandisa Google Mepu.
Kutaura kwepamutemo kunogona kuve kwakaoma kuverenga mukati mechibvumirano cheyakajairwa saka ita shuwa kuti iwe unoziva. Nzira yakapusa ndeye kungobvunza:
Chii chinoitika kana tikamisa hukama hwedu hwebhizinesi? Ndine yangu here kana kuti ndeyenyu?
Kana tichida kugadziriswa mushure mekupedza hukama hwedu hwebhizinesi, izvo zvichaitika sei?
Iniwo handisi kusundidzira muchinyorwa chino kuti iwe unofanirwa nguva dzose kutaurirana muridzi pamusoro peiyo agency. Kazhinji, iwe unogona kuwana yakakwikwidza kwazvo mitengo kubva kumasangano nekuti ivo vakatoita hwaro uye vane yavo midziyo uye maturusi ekuita mabasa. Izvi zvimwe zve lease or installment chibvumirano uye unogona kushanda kuti ubatsirwe kana uchida kuchengetedza mari.
Semuenzaniso, tinogona kutenga mutengo kuzere saiti uye midhiya yese ye $ 60k asi tinotaurirana $ 5k pamwedzi chikamu. Mutengi anobatsirwa nekuwana saiti nekukurumidza pasina kubhadhara mari yese kumberi. Asi iyo agency inobatsira nekuti sezvo gore rinopfuura, ivo vane yakaenzana mari yemari. Kana mutengi akafunga kutema kontrakiti ipfupi uye nekukanganisa, vanogona zvakare kurasikirwa nenhumbi pamwe chete nazvo. Kana kuti pamwe vanogona kutaurirana mubhadharo wemari yekutenga zvinhu.
Tiri kushanda nemagweta edu izvozvi pakujekesa zvirinani ichi chinopihwa vatengi. Tinogona kupa zvibvumirano zvitatu zvakasiyana, zvinosanganisira kubvunza kwakachena pasina zviwanikwa, kuitiswa kwatinochengeta kodzero dzebasa pamutengo wakaderera, uye kuuraya uko vatengi vedu vanochengeta kodzero dzebasa pamwero wakakwirira.
Nenzira iyi, makambani anotenda kuti tingave takanyanyisa mutengo anogona kushanda nesu pamutengo wakaderera… asi kana tikabudirira, uye vachishuvira pachake kodzero dzebasa, ivo vachada kutaurirana iko kutenga kubva kwatiri. Kana ivo vanogona kungosiya, uye isu tinochengeta basa racho kuti tikwanise kuridzorera kune mumwe mutengi.
Tags: bokachibvumirano chesanganozvibvumirano zvesanganoagency kutauriranachibvumiranokutapwa
WittyParrot: Ruzivo rweMagetsi Ekutengesa uye Kushambadzira Kutaurirana
3 Matanho Ekutanga Bhizinesi Vhidhiyo Kushambadzira Campaign